Tetikasa fihariana Mila fanazavana sy tari-dalana
Zava-dehibe ny tetikasa “Fihariana” ho an` ny firenena. Tokony hivelatra mba tsy hivangongo eto an-drenivohitra fa hisandrahaka manerana an`i Madagasikara ny tetikasa.
Eny amin`ireo Antenimieran`ny varotra manerana ny nosy kosa ny mason’ny rehetra satria hatoby eny avokoa ireo antontan-taratasy fangatahana. Ahoana ny masotsivana ? Ny fahazoana hampiasa io vola io ? Zavatra tsy azo lavina ny fikarakrana antontan-taratasy ka ahoana ireo tanora any ambanivohitra ? Tena hizara mahitsy sy hilamina tsara amin`ireo tanora manana tetikasa ? Sao hisy indray ny hoe “ tanora manana tetikasa miaraka amin`i Andry Rajoelina” toy ity fifidianana solombavambahoaka ity. Tsy mazava ny fampiharana ny vola ampiasaina. Betsaka ny tanora Malagasy manam-paniriana hampitombo ny velaran-tany hamboleny, faniriana hampiasa vola any amin`ny faritra lavitra ka manantena hahazo amin`io 200 miliara ariary io. Mila fanazavana sy tari-dalana amin`io rafitra io mba ahafahana mitsinjara mitovy sy mampitovy lenta ny rehetra ary manentana. Tsy hiteraka voka-tsoa ho an`ireo tanora raha izany indray no zavatra hitranga. Vao mainka hiteraka fisaraham-bazana eny amin`ny fiarahammonina eny amin`ny sehatra isan-karazany.